राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, के गर्न पाइँदैन ? - Recent Nepal News
राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, के गर्न पाइँदैन ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २७, २०७९ समय: २०:३८:४१
काठमाडौं । आज राति १२ बजे मौन अवधि सुरु हुँदै छ। मतदान अगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ। मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन।
निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आजै राति १२ बजेदेखि देशका सीमानाका बन्द गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने रोकिएको छैन। आउँदो शुक्रबार देशभर एकै चरणमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदै छ। निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडान र अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।